8 inch mindi biodegradable
Mindida noole rogrogmi karta
Qaadada bayoolajiga ah
Qaadada farmaajo noole rogrogmi kara
Gooyo la kariyo
Saxan la kariyo
Maddiibad noole rogrogmi karta
Maddiibad la kariyo
saxaarad noole rogrogmi karta
Weelka noolaha laga yaabo
Weel aan la karin karin
Koob bidegradable ah
Koob la kariyo
saxaarad likaha biodegradable
saxaarad fidsan oo nooledegradable ah
weel noolayn karo
weel noole ka samaysan oo dabool leh
8 inch 3-qol weel bayoolajirtay
6.5 inch CPLA Spork la kariyo
6.5 inch CPLA fargeeto la burburin karo
6 inch CPLA Qaado la kariyo
Walxaha caadiga ah:Waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga soo saaro saliidda iyo kheyraadka saliidda ayaa sii kordhayay gabaabsi, dhammaan agabka laga soosaaray saliidda gubaneysa ee aan nooleyn karin waxay wasakhayn doontaa deegaanka. soosaar...
Agabka caadiga ah:
Maaddooyinka ugu muhiimsan ee laga soo saaro saliidda iyo kheyraadka saliidda ayaa sii kordhayay gabaabsi, dhammaan agabyada laga soo saaro saliidda gubanaysa ee aan biodegradable ahayn waxay wasakhayn doontaa deegaanka.
Walxaha noolaha ku salaysan:
Waxa ugu muhiimsan ee loo isticmaalo istaarijka sida alaabta ceyriinka ah, istaarijka laga soo saaro dhirta, ee ka tirsan kheyraadka dib loo cusboonaysiin karo waa soo celinta alaabada xaalufka deegaanka dabiiciga ah.
Cuntooyinka kuleylku waxay u adkeystaan ​​​​cuntooyinka kulul ilaa 110 sentimitir.
Marka la barbardhigo qalabka dhaqameed ee laga sameeyay 100% caag bikrad ah, goyntan waxaa lagu sameeyay 70% walxo dib loo cusboonaysiin karo, taas oo ah doorasho kale.
Goyntayada noole ku salaysan oo laga sameeyay 70% kheyraadka dib loo cusboonaysiin karo, in kasta oo aanay ahayn mid la burburin karo, balse aan la karin karin
U dulqaadashada heerkulka u dhexeeya -10 ilaa 110 centigrade.Microwave, talaajad, qaboojiyaha iyo foornada saaxiibtinimo leh.
Waa caafimaad, nadaafad, aan sun ahayn, aan waxyeello lahayn oo ammaan ah.
Ecogreen waxay leedahay awood cilmi baaris oo xoog leh waxayna wax ka qaban kartaa dalabka iibka tirada badan iyo alaabada la habeeyey.
Ku soo dhawaada nala soo xidhiidh wixii faahfaahin dheeraad ah.
Hore: 8 inch fargeeto biodegradable
Xiga: 8 inch saxan biodegradable
cutlery airline biodegradable
7 inch qaaddo bayoolajireed 1
6 inch qaaddo maraq noolegraradable
8 inch qaaddo maraq bayoolajirtay
7 inch fargeeto noole 1
6 inch qaaddo shaah biodegradardable